Homeसमाचारचर्चित अभिनेत्री रेखाले आखिर कसको नाम को लगाउछिन सिन्दुर ? यस्तो छ भित्रि र’हस्य
March 18, 2021 admin समाचार 5844
रेखा ७० को दशककी सुन्दर अ’भिनेत्री रेखाको नाम यस्ता अभा’गी अभिनेत्रीमा पर्छ, जो अहिलेसम्म च’र्चाको विषय बनेको छ । रेखा र अमिताभको प्रेमसम्बन्ध त हिन्दी सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो प्रेमक’हानी हो । जब अमिताभ र रेखा एक–अर्कासँग नजिक भए, त्योभन्दा अ’गाडि नै अमिताभले जया भादुडीसँग वि’वाह गरिसकेका थिए ।
रेखाले अमिताभको नामको सिन्दूरसम्म हा’लेको किस्सा पनि बलिउडमा हिट छ । करिश्मा कपुरस्९० को दशककी हिट अभिनेत्री करिश्मा क’पुर अजय देवगणसँग ग’हिरो प्रेममा थिइन् । अजयसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् । यो जोडी फिल्म ‘जिगर’, ‘धनवान’, ‘संग्राम’, ‘सुहाग’ ‘शक्तिमान’ फिल्म’मा देखिए ।
त्यही समय अजय र रविना टन्डनको प्रेम’प्रसंग बाहिर आयो । अनि करिश्माको प्रेम अ’धुरै रह्यो । अजय र रविना टन्डन फिल्म दिल’वालेबाट नजिक भएका थिए । तर, उनीहरूको प्रेम पनि सफल भएन । सोनाली बेन्द्रेस्९० को दशककी सुन्दर अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे अभिनेता सुनील सेट्टी’सँग प्रेममा थिइन् ।
यी दुईको भेट १९९४ मा आए’को फिल्म ‘टक्कर’ को सुटिङका क्रममा भएको थियो । पछि यो जोडीले ‘गद्दार’, ‘सपूत’, ‘भाइ’, ‘कहर’, ‘हम से बढकर कौन’ र ‘रक्षक’ जस्ता हिट फिल्म दियो । फिल्मी या’त्राका क्रममा सोनाली र सु’नील प्रेममा परे । दुवैको विवाहको कुरा पनि चलेको थियो । तर, सुनील पहिले नै विवाहित थिए । यही कारण सुनील पछि हटे । सोना’लीको प्रेम अधुरै रह्यो । नयाँ पत्रि’कामा खबर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवा’टारमा सुरु भएको छ । आजको बैठकमा ओली पक्षका सांसदहरु मात्र उपस्थित रहेका छन् । यसअघि माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सां’सदहरु पनि बैठकमा उपस्थित हुने बताइए पनि उनीहरु बीच बाटैबाट सो पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन फर्कि’एका थिए ।
तर ओली पक्ष’का नेता महेश बस्नेतका अनुसार बैठकमा माधव नेपाल समूहका सांसदहरु लालबाबू प’ण्डित, तुलसी थापा, नन्दा चपाइ, माया ज्ञवाली, सबिना हुसियन, गोपाल बम र बिष्णु शर्मा सहभागी भएको दावी गरेका छन्। बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले गुटगत भेला नगर्न र पार्टी’बाहेक अरु कसैको निर्देशन नमान्न सांस’दहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
बैठकले आत्मालो’चनासहित संसदीय दल र पार्टीको कार्यक्रम सहभागी हुन सांसदहरूलाई आह्वा’न गरेको हो । दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले अन्यथा विधान अनुसार स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेताव’नीसमेत दिएको छ ।
नेकपा ए’मालेको संसदीय दलको बोर्ड गठन भएको छ । बालुवाटारमा जारी दलको बैठकले बोर्ड गठन गर्ने नि’र्णय गरेको हो । बोर्डमा २७ जना रहनेछन् । बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । विधान संशो’धन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
कार्य’दलमा विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र विमला राई पौड्याल रहेका छन् । बैठकमा वरिष्ठ नेता झ’लनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु भने अ’नुपस्थित छन् । तर, खनाल र नेपाल समूहका सांसदहरु नआएपनि ओलीले दुई मह’त्वपूर्ण लिने लिएका छन् । – खबरहबबाट
श्वेतासँग लगनगाँठो कस्दै आदित्य, विवाहको तयारी सुरु भयो
November 5, 2020 admin समाचार 9898
गायक आदित्य ना’रायण झाको विवाहको त’यारी सुरु भएको छ । केही दिन अगाडि प्रेमीका श्वेता अग्रवालसँग विवाह गर्ने ब’ताएका आदित्यको घरमा वि’वाहको तयारी स’मेत सुरु भएको छ । जसको अनु:मान उनले अहिले सा’र्वजनिक गरेको तस्बिरबाट
September 30, 2020 admin समाचार 16281
मानिसह’रुको जीवन पद्ध’तिका विषयमा शास्त्र’मा उल्लेख गरिएको हुन्छ । शास्त्र’लाई मान्ने हो भने तपाईको जीव’नमा आउने बाधा व्य’वधान सहज रुपमा ह’टाउन सकिन्छ । कहि’लेकाँही मानिसहरुको जीव’नमा धेरै समस्या एकै’पटक निम्तिन सक्छन् । तर उनीहरु’लाई थाहा
बालिका खड्का पी’डित भए श्रीमानलाई का’रबाहीको कठघरामा उभ्याउँछु : जाङ्बु शेर्पा
April 23, 2021 admin समाचार 4989
प्रदेशन नम्बर १ का मुख्य’मन्त्री शेरधन राईका श्रीमती जाङ्बु शेर्पाले आफ्नो श्रीमानले बालिका खड्कालाई पीडित बनाएको प्रमाण भएको खण्डमा आफैँ श्री’मानलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन तयार रहेको बताएकी छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मुख्यमन्त्री पत्नी
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242074)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229973)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229603)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228461)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227983)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227418)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226768)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226348)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194368)